Oviana no nanomboka ny fiankinan-doha amin'ny filma? - Ny valin'ny Fanamarinana
Home Oviana no nanomboka ny fiankinan-doha amin'ny filma?
Nametraka ny fanontaniana mazava momba ny fiankinan-doha amin'ny pôrnôgrafia i Gary Wilson: “Ohatrinona loatra?” amin'ny yourbrainonporn.com tranonkala. Nanamarika izy fa ity fanontaniana ity dia mihevitra fa ny vokatr'ilay pôrnôgrafia dia binary. Izany hoe, na tsy manana olana ianao, na mpidoroka pôrnôgrafia. Na izany aza, ny fiovan'ny ati-doha voan'ny pôrnôgrafia dia mitranga amin'ny fiparitahana iray. Tsy azo sokajiana ho mainty sy fotsy ihany izy ireo. Tsy izy ireo ihany no / na. Manontany hoe aiza no hiampitana ny tsipika tsy miraharaha ny fitsipiky ny neuroplasticity. Ny ati-doha dia mianatra foana, miova ary mampifanaraka ho setrin'ny tontolo iainana.
Ny fanadihadiana dia manambara fa na dia kely amin'ny fanentanana ambony aza dia afaka manova haingana ny atidoha sy manova fitondran-tena.
Ohatra, ny andro 5 dia tsy ampy Mampirisika ny marary amin'ny lalao video amin'ny olon-dehibe salama. Ireo mpilalao dia tsy nandevozin'ny fiankinan-doha, fa ny asan'ny ati-doha avo lenta nifanaraka tamin'ny filan-dry zareo hilalao. Amin'ny iray hafa andrana, saika ny voalavo rehetra nomena fidirana tsy misy fetra amin'ny "sakafo cafeteria" dia nihinan-kanina. Andro vitsivitsy monja no nandehanana tamin'ny sakafo junk mba hihena ireo mpandray ny dopamine. Izany dia nampihena ny fahafaham-pony tamin'ny fihinanana. Ny fahafaham-po noho ny tsy fahafaham-po no nahatonga ny voalavo hihinana bebe kokoa.
Ho an'ny pelaka Internet, ity Alemaina avy amin'ny solontenan'ny Max Planck Institute dia nijery lehilahy izay mpampiasa maivana amin'ny pôrnôgrafia. Nahitana fiovana goavana teo amin'ny atidoha izany. Ny pôrnôgrafia izay nandevona azy ireo, ny fifandraisana tsy dia ilaina dia teo anelanelan'ny fisainana sy ny fihetseham-po ao amin'ny atidoha. Tamin'izay fotoana izay dia nisy ny fampidirana am-bava ihany koa ny fidirana an-tsokosoko mankany amin'ny pôrnôgrafia, ny pôrnôgrafia nialany. Ity dia mari-panazavoana ny tsy fanavakavahana raha toa ka misy olona iray mihamatotra amin'ny fisian'ny fanentanana. Rehefa nandeha ny fotoana dia mila fitaovana manafintohina sy manjavozavo kokoa izy ireo mba hahatonga azy ireo ho tezitra.
An Italiana fianarana nahita fa ny 16% amin'ireo zokiolona ao amin'ny lisea izay nandoro ny pôrnôgrafia mihoatra ny indray mandeha isan-kerinandro dia nahatsapa faniriana ara-nofo tsy ara-dalàna. Ampitahao amin'ny 0% amin'ireo mpisera tsy tia pôrnôniana mitatitra ny faniriana ara-nofo ambany.
Olana tsy misy fiankinan-doha
Ny fanesorana dia tsy ilaina akory ny fiankinan-doha amin'ny fiovan'ny ati-doha na ny fiantraikany ratsy.
Raha tsorina, ny fitondran-tena ara-pananahana, ny fahatsapan-tarehy, ny fanentanana ary ny fiovana hafa mifandraika amin'ny fiankinan-doha hafa dia mitranga eo amin'ny sehatra iray. Fantaro koa fa ny atidohantsika dia mianatra tsy tapaka sy mifanaraka amin'ny tontolo iainana. Ny pôrnôgrafia amin'ny Internet dia fanentanana mahery vaika. Mikendry ny fitondran-tena eo amin'ny lahy sy vavy izy, manova ny atidoha ary mampivelatra ny fahatsapana.
Raha te hijery ny fikarohana momba ny fifandraisana eo amin'ny fampiasana sary vetaveta sy ny fanahiana ara-tsosialy ianao dia tsindrio Eto. Ity dia hitondra anao any amin'ny tranokala ivelany ary hisokatra amin'ny varavarankely vaovao.
Mahazo fanampiana >>